तालिबानको आगमनपछि अफगानिस्तान क्रिकेट कता ? | Hamro Khelkud
तालिबानको आगमनपछि अफगानिस्तान क्रिकेट कता ?
तालिबान विद्रोहीले अफगानिस्तान सफल रुपमा कब्जा गरेपछि विश्व जगतमै नयाँ तरङ्गसँगै अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई विश्वका सबै देशले अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्काउन निरन्तर पहल गरिरहेका छन् ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेर भागेसँगै तालिबान सत्ता सम्हाल्ने तयारीमा छन् । तालिबानको कब्जाले विश्व क्रिकेटमा उदाउँदो शक्तिशाली अफगानिस्तान क्रिकेट टोलीलाई कस्तो असर पर्ला भन्ने आम क्रिकेट समर्थक र शुभचिन्तकको मनमा चासोको विषय बनेको छ ।
विश्व क्रिकेट जगतमा पछिल्लो एक दशकमा अफगानिस्तानको विकासको फड्को उदाहरणीय र लोभलाग्दो छ । क्रिकेटले द्वन्द्वको निरन्तर चपेटा चोटमा खुसीको मल्हम लगाउँदै आएको छ । अफगानिस्तानका खेलाडहरुले शान्तिको लागि निन्तर विश्व समूदायसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तालिबानको कब्जापछिसँगै विदेशी मात्र होईन कतिपय स्वदेशी नागरिकनै देश छोड्न खोजिरहेका छन् ।
अफगानिस्तानका विश्व चर्चित तीन स्पिनर राशिद खान, मुजिब उर रहमान र मोहम्मद नाबी इंग्ल्यान्डमा द हन्ड्रेड प्रतियोगितामा खेलिरहेका छन् । अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डका सिईओ हामिद शिनवारीले तालिबानको आगमनले अफगानी क्रिकेटलाई असर नपर्ने बताउँछन् । अफगानिस्तान राष्ट्रिय टोलीका सबै खेलाडी र परिवार सुरक्षित रहेको बताइएको छ ।
‘राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी र उनीहरुको परिवार सुरक्षित छन् । तालिबान क्रिकेटलाई माया गर्छन् । सुरुवात देखिनै उनीहरुले हामीलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । तालिबानले हाम्रो गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने छैनन्,’ शिनारीले पीटीआईसँग भनेका छन् ।
त्यसैमा थपे, ‘क्रिकेटमा तालिबानको कुनै हस्तक्षेप गरेको देखेको छैन । हाम्रो क्रिकेट अघि बढ्न उनीहरुले समर्थन गर्नेमा मलाई आशा छ ।’
विश्व क्रिकेटमा अफगानिस्तानको उदय भएको दुई दशक मात्र भएको छ । तर टेस्ट मान्यतासम्म उपब्धी हात पारिसकेको छ । यसअघि सन् १९९६ देखि २००१ समय सम्म तालिबानले अफगानिस्तान सत्ता सम्हाल्दा भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्दैन थियो । तालिबानले शासन फैसला औपचारिक रुपमै क्रिकेटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तालिबानको २००१ मा सत्ताच्यूतपछि अफागानिस्तानको क्रिकेट पनि फस्टायो ।
दुई दशक नबित्दै उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ अफगानिस्तानले २०१८ मा टेस्ट मान्यतानै प्राप्त गर्यो । ‘तालिबान युगमा पनि क्रिकेटको प्रचारप्रसार भएको थियो । राम्रो कुरा हामी सामान्य अवस्थामा फर्कदै छौं । बुधबारदेखि हामी कार्यालय खुलाउने छौं र पाकिस्तानसँगको सिरिजको लागि प्रशिक्षणको तयारी गर्नेछौं,’ सिईओ शिनवारीले भने ।
अफगानिस्तानले सेप्टेम्बर पहिलो साता पाकिस्तानसँग तीन ओडिआई सिरिज श्रीलंकामा खेल्ने कार्यक्रम छ । तर तालिबानको कब्जापछि सिरिज हुनेमा चिन्ता थपिएको छ । उक्त सिरिज श्रीलंकामा हुने छ । अफगानिस्तानका राशिद, मुजिब र नाबी उक्त सिरिजपछि आइपिएल खेल्ने युएई जाने छन् । तीनै खेलाडीले सनराइजर्स हैदराबादबाट आइपिएल खेल्ने छन् ।
अफगानिस्तानलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता मुखमै आएको टि२० विश्वकपको छ । खेलाडी तालिबानको भय र सन्त्रासबाट माथि उठ्दै तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ । तालिबानको कारण अफगानी खेलाडीको मनोबल र मानसिक रुपमा ठूलो असर पर्न सक्ने चिन्ता थपिएको छ । अफगानिस्तानले भारतको देहरादुन र नोयडामा रहेको स्टेडियमलाई घरेलु मैदान बनाउँदै आएको छ । तालिबानले क्रिकेटप्रति कस्तो कदम चाल्छ त्यो पर्खाइमा अफगानिस्तान छ ।
टि२० विश्वकपमा अफगानिस्तानले पहिलो खेल २५ अक्टोबरमा पहिलो चरणको समूह बी को विजेतासँग खेल्ने छ । पाकिस्तानसँग अक्टोबर २९ मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । अक्टोबर ३१ मा समूह बी को उप विजेतासँग खेल्नेछ । नोभेम्बर तीन मा भारत र नोभेम्बर सात मा न्युजिल्यान्डसँग खेल्नेछ । अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले मंगलबार श्रीलंका पूर्व क्रिकेटर ओइश्का गोणोर्डानीलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्दै तालिबानको कब्जाले असर नपर्ने संकेत पनि दिएको छ ।
अफगानिस्तानका पूर्व प्रशिक्षक लालचन्द राजपूतले तालिबानले क्रिकेटलाई साथ दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन् । हाल जिम्बावे क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक समेत रहेका लालचन्द राजपूतले भनेका छन्, ‘म पक्का छु, अफगानिस्तानको सर्वाधिक ठूलो खेल क्रिकेटलाई तालिबानले सहयोग र समर्थन दिने छन् । क्रिकेटले अफगानिस्तानका जनतामा धेरै खुसी ल्याउने छ । म धेरै खेलाडीहरुसँग सम्पर्कमा छु । आज पनि धेरैसँग कुरा गरेको छु । उनीहरु विश्वस्त थिए क्रिकेटलाई तालिबानले हानी, नोक्सानी र बिचलित हुन दिने छैनन् ।’
तालिबानले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएका सबै कर्मचारीलाई आम माफी दिँदै पूर्ण विश्वासका साथ काममा फर्किन आग्रह गरेको छ । २००१ मा तालिबानलाई अमेरिका नेतृत्वको फौजले सत्ताबाट हटाएको थियो ।
तालिबान प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र ईस्लामिक कानुन लागु गर्न चान्छन् । तालिबानहरु महिलालाई खेलकुदमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । यसले अफगानिस्तानको महिला टोलीको भविष्य भने चिन्ता देखिन्छ ।
तालिबान दुई दशकपछि अफगानिस्तानको सत्तामा फर्कदै क्रिकेटमा आकाश पातलको परिवर्तन आएको छ । तालिबान दुई दशकअघि सत्तामा हुँदा क्रिकेटलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर अहिले अफगानिस्तान जनताको सबैभन्दा बढी खुसी क्रिकेट बनेको छ । तालिबानको मुख्य उदेश्य अमेरिकी हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै सत्तामा जानु थियो । र सफल पनि भए ।
क्रिकेट उनीहरुको लागि बाधक देखिदैन । अफगानिस्तानले क्रिकेटमा गरेको विकासले उनीहरुलाई हेर्ने विश्वकै नजर फेरिएको छ । तालिबानहरु जनता खुसी तोड्दै निराशा भने पक्कै गराउन चाहँदैनन् । जनताको साथ र विश्वास बिना तालिबानलाई पनि सत्तामा टिक्न मुश्किल पर्नेछ । दुई दशकमा तालिबानमा पनि धेरै कुरा फेरिएको छ । त्यसैले तालिबानले यस पटक क्रिकेटलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
दुई दशकमा तालिबानको क्रिकेट प्रतिको सोच बदलिएको आशा गरिएको छ । अफगानिस्तानले जुन परिवर्तन र विकास गरेको छ त्यसले क्रिकेटमा प्रतिबन्ध र असरको सम्भावना निकै कम देखिन्छ । खेलाडी, समर्थक र विश्व क्रिकेट समुदाय पनि तालिबानले अफगानिस्तान क्रिकेटमा कुनै असर र हस्तक्षेप नगरोस भन्ने चाहन्छन् । तर यसको असर खेलाडीको मनोबल र मानसिक रुपमा पर्ने हुँदा प्रदर्शनमा गिरावट आउने सम्भावना भने रहन्छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा भुपेन्द्र जिसीको प्रस्तुति)